LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော ဖန်သားပြင်၏ တကယ့်တောက်ပမှု အညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။ - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
LED အီလက်ထရွန်နစ် ကြီးမားသော ဖန်သားပြင်၏ တကယ့်တောက်ပမှု အညွှန်းကိန်းကို အကဲဖြတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင် LED ဒစ်ဂျစ်တယ်စခရင်၏ အကြိမ်ရေ တိုးလာနေပါသည်။, LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်နှင့်ဆက်စပ်သောလည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများဝယ်လိုအားလည်းတိုးလာသည်။. စျေးကွက်တွင်ရောင်းချနေသော LED မီးပြွန်များရောစပ်ထားသော ငါးနဂါးပုတီးစေ့များ၏ အရည်အသွေးမှာလည်း မညီမညာဖြစ်နေသည်။, တောက်ပမှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။. စတိုးဆိုင်တစ်ခုစီတွင် တောက်ပမှု 1400-1600mcd ဖြင့် အမှတ်အသားပြုထားသော အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒများသည် တောက်ပမှုကို မရောက်နိုင်ပါ။. ယုတ်ညံ့သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်စဉ်သည် စားသုံးသူများကို လှည့်စားသည်။. လူအများစုသည် LED အလင်းထုတ်ပြွန်များ၏ တောက်ပမှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါ။. ထို့ကြောင့်, အလင်းသည် တောက်ပခြင်းဖြစ်သည်ဟု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများက ဆိုကြသည်။. တောက်ပမှုအရွယ်အစားအတွက်, ပိုကြီးလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။, ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ, သင့်လျော်သော တောက်ပမှု အရွယ်အစားသည် မျှော်လင့်မထားသော ရလဒ်များကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။၁、 LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်၏တောက်ပမှုကိုမည်သို့ခွဲခြားနိုင်မည်နည်း။?
1. အလင်းထုတ်လွှတ်သောဒိုင်အိုဒိတ်များကို ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အဆင်ပြေသော 3V DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို ပြုလုပ်ပါ။, ဘက်ထရီနဲ့လုပ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။. ခလုတ်နှစ်ခုပါသော ဘက်ထရီကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ပလပ်စတစ်ပြွန်ငယ်တစ်ခုတွင် တပ်ဆင်ထားပြီး အပြုသဘောနှင့် အနုတ်အထွက်အဖြစ် probes နှစ်ခုကို ထုတ်ပေးသည်။. အမြီးစွန်းကို ကျည်ဆံပါသော ခလုတ်တစ်ခုအဖြစ် တိုက်ရိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။. အသုံးပြုတဲ့အခါ, အပြုသဘောနှင့် အပျက်သဘောဆောင်သော ပလေတပ်များသည် LED ၏ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာ ပင်များကို တဆက်တည်း ဆက်သွယ်သည်။, အမြီးစွန်းရှိ ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ဖိထားပါ။, နှင့် LED ကိုဖွင့်ထားသည်။.
2. ဒုတိယအချက်, ရိုးရှင်းသောအလင်းတိုင်းတာရေးကိရိယာသည် photoresist နှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။. ပါးလွှာသောဝါယာကြိုးနှစ်ချောင်းကို photoresist မှထုတ်ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်မာလ်တီမီတာ၏ probes နှစ်ခုသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသည်။. Multimeter ၏ဂီယာအား 20K တွင်ထားရှိထားပါသည်။ (photoresist ပေါ် မူတည်, စာဖတ်ခြင်းကို တိကျအောင် ကြိုးစားပါ။). တိုင်းတာသောတန်ဖိုးသည် အမှန်စင်စစ် photoresist ၏ခုခံမှုကို သတိပြုပါ။. ထို့ကြောင့်, အလင်းပိုတောက်ပလေဖြစ်သည်။, တန်ဖိုးက ပိုနည်းတယ်။.
3. LED တစ်လုံးယူ၍ အထက်ပါ 3V DC ဖြင့် မီးထွန်းပါ။. အလင်းထုတ်လွှတ်သောဦးခေါင်းသည် ချိတ်ဆက်ထားသော photosensitive resistor ၏ ဓါတ်ပုံအာရုံခံမျက်နှာပြင်နှင့် နီးကပ်နေသည်။. ဒီအချိန်မှာ, LED ၏တောက်ပသောတောက်ပမှုကိုခွဲခြားရန် multimeter သည်ဖတ်လိမ့်မည်။.
2、 တောက်ပမှု ခွဲခြားမှုအဆင့် ဆိုသည်မှာ လူ့မျက်လုံးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သော အမှောင်ဆုံးနှင့် အအဖြူဆုံးပုံများကြား တောက်ပမှုအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။.
LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်၏ မီးခိုးရောင်အဆင့်သည် အလွန်မြင့်မားသည်။, အရာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 256 သို့မဟုတ်ပင် 1024. သို့သော်, လူ့မျက်စိ၏တောက်ပမှုအပေါ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်, ဤမီးခိုးရောင်အဆင့်များကို အပြည့်အဝ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ကပ်လျက် မီးခိုးရောင်အဆင့်ရှိသော လူအများအပြားသည် တူညီနိုင်သည်. မျက်စိနဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံတာက လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကွဲပြားပါတယ်။. ပြသမှုမျက်နှာပြင်အဘို့, လူတွေရဲ့ မျက်လုံးကို မှတ်မိနိုင်မှုအဆင့်က ပိုများလေပါပဲ။, ပိုကောင်းလေ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြထားတဲ့ပုံကလူတွေအားလုံးကိုကြည့်ဖို့ပါ. လူ့မျက်လုံးများ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သော တောက်ပမှုအဆင့်များ ပိုများလေဖြစ်သည်။, မျက်နှာပြင်၏ အရောင်အသွေး နေရာပိုကျယ်လေ ဖြစ်သည်။, ကြွယ်ဝသော အရောင်များကို ပြသရန် အလားအလာ ပိုများသည်။. အထူးဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် တောက်ပမှု ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအဆင့်ကို စမ်းသပ်နိုင်သည်။. ယေဘူယျအားဖြင့်, display screen သည် အဆင့်ထက်ပို၍ရောက်ရှိနိုင်သည်။ 20, ဘယ်အဆင့်က ပိုကောင်းလဲ။.
3、 တောက်ပမှုနှင့် အမြင်အာရုံထောင့်အတွက် လိုအပ်ချက်များ:
မိုးလုံလေလုံ Full-color LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရောင်သည် 800cd ထက်ပိုရမည် / m2, နှင့် ပြင်ပရောင်စုံစခရင်၏ တောက်ပမှုသည် 1500cd ထက်ပိုသင့်သည်။ / m2, display screen ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်, သို့မဟုတ်ပါက အလင်းအမှောင် အလွန်နည်းသောကြောင့် ပြသထားသည့်ပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ရပါ။. အလင်းအား LED ၏အရည်အသွေးဖြင့်အဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။. အမြင်ထောင့်၏အရွယ်အစားသည် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏ ပရိသတ်ကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။, ဒီတော့ပိုကြီးလေပိုကောင်းလေ. အဆိုပါကြည့်ရှုထောင့်အဓိကအားဖြင့်သေအထုပ်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်.
LED အီလက်ထရွန်းနစ်စခရင်၏တောက်ပမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်လိုအပ်သည်။. လက်ရှိအချိန်မှာ, မြို့ပြတောက်ပသော LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏ တောက်ပမှုလိုအပ်ချက်များ, သို့မဟုတ်အသစ်သောစည်းမျဉ်းများ, LED ဖန်သားပြင်၏တောက်ပမှုမြင့်မားနေပါက, အနီးအနားရှိနေထိုင်သူများကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မည်. ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်အလို့ငှာ, လုပ်ငန်းများသည် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်များကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်အသိပညာရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။.
အိမ်တွင်းနှင့် ပြင်ပကြော်ငြာများအတွက် LED အီလက်ထရွန်နစ်စခရင်၏ ပြဿနာများ
စင်မြင့်ပွဲရှိုးရှိ LED မျက်နှာပြင်၏တည်ငြိမ်မှု